ကြော်ငြာကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 23
Than Win Hlaing – သန်းဝင်းလှိုင်၏ ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ဂါရ၀ပြု စာအုပ် မိုးမခက ဖြန့်ချိ
သန်းဝင်းလှိုင်၏ ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ဂါရ၀ပြု စာအုပ် မိုးမခက ဖြန့်ချိ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၂၊ ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့၊ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရပြီး ကျဆုံးခဲ့ရသောနေ့၊ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မိုးမခ၏ ပင်တိုင် စာရေးဆရာ၊ သမိုင်းသုတေသီ၊ သန်းဝင်းလှိုင် ရေးသားပြုစုသော “အာဇာနည်နေ့ သို့မဟုတ် မြန်မာ့သမိုင်း၌မမေ့အပ်သော နေ့တနေ့” စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ ၁၇၀ ရှိပြီး၊ အခန်းခွဲများအဖြစ် ကြမ္မာဆိုးဝင်သောနေ့၊ ဦးစောနှင့် အပေါင်းအပါတို့၏ နောက်ဆုံးနေ့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးခဲ့စဉ်က၊ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးအောင်ဆန်း၏ နောက်ဆုံးနေ့ (ဒဂုန်တာရာ)၊ အာဇာနည် ၉ ဦး၊...
WHIZZO TYPING TUTOR
မြန်မာကီးဘုတ် လက်ကွက် လေ့ကျင်ခန်း ပရိုဂရမ် WHIZZO TYPING TUTOR မိုးမခရွာဆော်ကြီး ထပ်ဆင့်ကြော်ငြာ၊ ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၂ (သူငယ်ချင်း ရေ … မြန်မာယူနီကုဒ် Typing ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့ကျင့်လို့ ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ WHIZZO TYPING TUTOR လေးကို သူငယ်ချင်း စမ်းသုံး လို့ရအောင် ပို့ပေးလိုက်တယ်။ သုံးရတာလည်း လွယ်တယ် သူငယ်ချင်း။ ပြီးတော့ free နော်။ သူငယ်ချင်းလည်း သုံးရတာ လွယ်တယ် အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးပါ အုံးနော်။ WindowXP မှာ မြန်မာယူနီကုဒ် ကို မှန်မှန်ကန်ကန် မဖော်ပြရင် iComplex3 ကို install လုပ်ပေးဖို့ လို...
ဘေးဧရိယာ၊ ဥက္ကလံမြို့၊ ဓမ္မအေးရိပ်ကျောင်း ရဟန်းခံရှင်ပြုအစီအစဉ် ထုတ်ပြန်
မိုးမခရွာဆော်ကြီး ကြော်ငြာ၊ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၂ ရပ်နီး ရပ်ဝေးက စေတနာရှင်များ၊ လုပ်အားပေးများ၊ အလှူရှင်များ ကို ဖိတ်ခေါ်နေပြီ။ ရဟန်းခံ အချိန် – သောကြာနေ့နံနက်ပိုင်း (၉)နာရီ ရဟန်းခံ နေရာ – မေတ္တာနန္ဒကျောင်း ရှင်ပြု စနေနေ့နံနက် ( ၈ ) နာရီ ရှင်သာမဏေလောင်းများဆံချ ( ၉ ) နာရီရှင်ပြု။ (၁၀) အနုမောဒနာတရားနာ (၁၁) ဆွမ်းကပ် (၁၂) ဧည့်သည်များကျွေးမွေးဧည့်ခံ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ဗုဒ္ဓတရားစာသင်တန်း သင်တန်းကာလ-( 07/22/2012 ) မှ ( 07/29/2012 ) အထိ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ညနေ(၆)နာရီ အခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ရန်။ Dhamma Aye...
အသင်းအဖွဲ့များ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အနာဂတ်မြန်မာပြည် ဆွေးနွေးပွဲများ အပတ်စဉ် ကျင်းပမည်
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ကြော်ငြာ၊ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၂ “အသင်းအဖွဲ့များ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အနာဂတ်မြန်မာပြည်” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ သြဇာတက္ကိမကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံရေးလူမှုရေး စာရေးဆရာများ၊ ပညာရှင်များက အလှည့်ကျ ပင်တိုင်ဆွးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ လာရောက်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးလူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေက အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလဧည့်ပရိတ်သတ်တွေကလည်း အပြန်အလှန် မေးခွန်းထုတ် ဆွေးနွေး ပါဝင်ကြနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ စကားဝိုင်းတခုကို အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားဝိုင်းကို ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ရက် စနေနေ့က စတင်ပြီး ၆လတိုင်တိုင် အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်းမှာပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အချိန်ကတော့ ။ နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီ မှ ၄း၀၀ နာရီထိဖြစ်ပါတယ်။ စကားဝိုင်းပြုလုပ်မယ့်နေရာကတော့ ။ ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်က တော်ဝင်နှင်းဆီစားသောက်ဆိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၄ရက် စနေနေ့ စကားဝိုင်းမှာ ပင်တိုင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်နဲ့ စတင်ပါဝင်မယ့်...
Mudita Shwekyaung – အရှင်ဥာဏီကာဘိဝသ ကျောင်းထိုင်တဲ့ မုဒိတာရွှေကျောင်း တနှစ်ပြည့်အလှူပွဲ ဖိတ်
အရှင်ဥာဏီကာဘိဝသ ကျောင်းထိုင်တဲ့ မုဒိတာရွှေကျောင်း တနှစ်ပြည့်အလှူပွဲ ဖိတ် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇူလိုင်၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂ မုဒိတာရွှေကျောင်းရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ပွဲကုို ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ် ဟေးဝပ်မြို့၊ မုဒိတာရွှေကျောင်းမှာ အကြိုဓမ္မသင်တန်းများ၊ ရွှေဓမ္မသဘင်များနဲ့ ၂၀၁၂ ခု ဇူလုိုင်လ ၁၅ ရက် (July 15, 2012) တနဂ င်္နွေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့လယ် ၁ နာရီအထိ စည်ကားသုိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပါမယ်။ ကျောင်းတည်စက စလုို့တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိတုို့လှူဒါန်းထားခဲ့ကြတဲ့ ကုသုိုလ်တံဆိပ် မုဒိတာရွှေကျောင်း ကျောင်းတော်ရိပ်မှာ ခေတ္တခဏ လာရောက်ခုိုနား မုဒိတာပွားရင်း ကုသုိုလ်ရှင်များရဲ့စေတနာထားကာ လှူဒါန်းကြမယ့် မြန်မာ့ရုိုးရာ စားသောက်ဖွယ်များကုိုလည်း ကြွရောက်သုံးဆောင်ကြဖုို့လေးစားစွာ...
မိုးမခ ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၂ ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားထားပြီး အရှေ့ကြယ်စာပေတိုက်မှထုတ်ဝေမည့် နောက်ကြည့်မှန် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ နှင့် စာရေးသူအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေ) နေ့မှာ ရန်ကင်းစင်တာမှာ နေ့လည် ၁၁ နာရီမှ ၁ နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၂ မှာတော့ မန္တလေး DNG Food Center မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ No tags for this post.
NYC – ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ နယူးယောက်မှာ ကျင်းပမည်
၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ နယူးယောက်မှာ ကျင်းပမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၂ လက်ခံရရှိတဲ့ ဖိတ်စာကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ – မြို့မိမြို့ဖ များနဲ့ ညီလေး ညီမလေးတုို့ရေ … အခုလာမယ့် ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်၊ ၂၀၁၂ မှာ မြန်မာပြည်က ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး (၉) ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း (၆၅) နှစ် တုိုင်တုိုင်ရှိခဲ့ပြီ။ တုို့ မြန်မာပြည်သားတွေ မမေ့သင့်တဲ့ နေ့ တနေ့ပေါ့။ ညီလေး ညီမလေးတို့တွေအားလုံး ဒီနေ့ကိုမမေ့ကြဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တို့ မမေ့သင့်တဲ့ ဒီအာဇာနည်နေ့ကို အခု နယူးယောက်မြို့မှာ အမှတ်တရ ကျင်းပကြရအောင်။ အားလုံး စုံစုံညီညီ သိုက်သုိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ပေါ့။ ဒီတခါ...
Adit Htan Sayadaw – အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော် အရှင်ကုလရက္ခိတ ၆၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ အောက်ပါ နိုင်ငံတို့တွင် ကျင်းပမည်
အဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော် အရှင်ကုလရက္ခိတ ၆၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ အောက်ပါ နိုင်ငံတို့တွင် ကျင်းပမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၂ မဟာဇေယျသိဒ္ဓိအဓိဋ္ဌာန်ဆရာတော် အရှင်ကုလရက္ခိ၏ ၆၅ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို သြစတြေးလျ၊ စင်္ကာပူ နှင့် အမေရိကန်ပြည် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တော်တို့တွင် ဒကာ၊ ဒကာမများ စုပေါင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့အတူ ရခိုင်ပြည်၊ စစ်တွေမြို့၊ အဓိဋ္ဌာန်သိမ်တော်ကြီး၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ စွန်ရဲကျေးရွာ၊ ကုလရက္ခိတကုန်းတော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာကျိန် သစ္စာရှင် ဘုရားကြီးတို့တွင်လည်း စဉ်လာမပျက်ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ဆရာတော်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းသာမက တုိုင်းနှင်ပြည်နယ် အသီးသီးက လာရောက်လျောက်ထားသော ကလေးသူငယ်များ လိုအပ်သည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး...
ဓမ္မဘေရီဆရာတော် ဦးဝီရိယ (တောင်စွန်း) ၏ အမေရိကန် ဓမ္မသင်တန်းခရီးစဉ် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၂ ဇွန်လဆန်းပိုင်းက စတင်ပြီး အမေရိကန်ပြည်သို့ ခရီးယာယီရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာပြည်က ဓမ္မဘေရီဆရာတော် ဦးဝီရိယ (တောင်စွန်း) ရဲ့ ဓမ္မသင်တန်းခရီးစဉ်များကုို စုံစမ်းမိသလောက် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ဇွန် ၂၉ မှ ၃၀၊ ဇူလိုင် ၁ အထိ။ Buffalo မြို့၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ရွှေမင်းဝံကျောင်း။ သိမ်သမုတ်၊ ရဟန်းခံ၊ တရားပွဲ။ ဇူလိုင် ၂ မှ ၆ အထိ။ နယူးယောက်မြို့တော်။ လောကချမ်းသာကျောင်း။ ဓမ္မစကြာ သင်တန်း။ ဇူလိုင်လ ၇ မှ ၈ အထိ။ ပင်ဆီဗေးနီးယားပြည်နယ် သို့ ၂ ည...
မေရီလင်း၊ ဘော်လတီမိုး၊ ဝေဇယန္တာကျောင်း၊ ဓမ္မစကြာနဲ့ ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း
အရှင်ဝီရိယ (ဓမ္မဘေရီဆရာတော်)၏ အမေရိကန်ပြည်ခရီးစဉ် မေရီလင်း၊ ဘော်လတီမိုး၊ ဝေဇယန္တာကျောင်း၊ ဓမ္မစကြာနဲ့ ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂ ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင် အပေါင်းတို့ “မထေရ်မြတ်တို့ စကားဝိုင်း“ စာအုပ်နှင့် “အိုခြင်းရဲ့ အလှ“ “ဘယ်ကျောင်းနေမလဲ မောင်ရေခဲ“ စသော ဆောင်းပါးများစွာတို့၏ ကလောင်ရှင် သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ၊ ဒီဃဘာဏက ဓမ္မဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) သည် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့ အထိ၊ မေရီလင်းပြည်နယ်၊ ဘော်လတီမိုးမြို့ ဝေဇယန္တာကျောင်းတိုက်၌ ကြွရောက်သီတင်းသုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြွရောက်သည့်အခိုက် အောက်ပါသင်တန်းများကိုလည်း ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါ၍ လာရောက်သင်ကြား နာယူမှတ်သားနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါး ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ သင်တန်း = ဓမ္မစကြာနှင့် ပဌာန်းသင်တန်း အချိန် ...
Page 23 of 24«1...2021222324»
နယူးယောက် ၃ပါးကျောင်း - သင်္ကြန်ပွဲတော် (ဧပြီ ၁၃၊ ဆန်းဒေး)
လက်ပတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲနှင့် သွေးမြေကျ သံဃာတော်များအား အလှူငွေပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေပွဲနှင့် ဓာတ်ပုံပြပွဲ ဒီဇင်ဘာ ၈
Adv- Vanishing Treasures of Myanmar
မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း မြန်မာပြည်မှာ ထုတ်သည်
နယူးယောက်မြို့တော် မြန်မာကွန်မြူနီတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည့်သူများ သိရှိထားသင့်သည့်အချက်များ ထုတ်ပြန်
နယူးယောက် ဘတ်ဖဲလိုးမြို့ြ့မန်မာဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ရှစ်လေးလုံး ၂၇ နှစ်ပြည့် အလံတင်အခမ်းအနား ကျင်းပမည်
ဆိုင်စံ (သမီး စိုင်းထီးဆိုင်) ၏ တကိုယ်တော် အခွေ
NYC - ၆၅ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ နယူးယောက်မှာ ကျင်းပမည်
Pocahontas မှာ ကံထွန်းသစ်၊ ဒေါ်မာမာအေး နဲ့ အောင်ဝေးတို့ စာပေဟောပြောပွဲ ဒီည
Germany, Frenkfurt - ကွယ်လွန်သူ ဆရာကြီးဦးဝင်းတင် အားရည်စူး၍ ရက်လည်ဆွမ်းသွတ် အမျှဝေ ဂုဏ်ပြုဆုတောင်းပွဲ
https://t.co/8iVaiaTPod https://t.co/51OVgNlNEq about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite
မင်းခိုင် – စကားလုံးများသာ ဓားသံလျက်များဖြစ်ခဲ့သော် …… https://t.co/uueRV3K7Xq https://t.co/2MfZtMV7ay about 17 hours ago ReplyRetweetFavorite